It is me. Ko Niknayman.: အမိမြန်မာပြည်ကို ကယ်တင်ပါ၊ လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပါ။
အမိမြန်မာပြည်ကို ကယ်တင်ပါ၊ လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပါ။
Posted by Ko Niknayman at 3:58 PM